သင့်​ကွန်​ပျူတာRAMတအား​လေး​နေပြီလား - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Unlabelled သင့်​ကွန်​ပျူတာRAMတအား​လေး​နေပြီလား
mmitdeveloper at 4:17:00 PM
3.save with name CleanRAM.vbs
4.close it and run file
တကယ်လို့သူငယ်ချင်းတို့ကRAM memoryကိုထပ်တိုးချင် လည်းအောက်ကကုတ်တွေကိုကူးလိုက်ပါ။ကျန်
Don't forget more than your memory capacity.
F1117st1983 October 3, 2013 at 10:18 PM
အဲ့ဒီ..ကုတ်တွေက..တကယ်စက်အမြင့်တွေမှာ သုံးလိုက်ရင် error ဖြစ်နိုင်သလားသိချင်တယ်ခင်ဗျာ..ဥပမာ..i7 3610QM..4G Ddr 3(800 Mhz) Graphic 610M (2 Gb) ကို CPU နဲ့ Memory မလိုက်ဖက်ဘူး(ကျွန်တော့အထင် 8 Gb memory) မှအဆင်ပြေမယ်ပေါ့ဗျာ..ဒါပေမယ့် .. 40000 လောက်ကုန်ပြီး memory တိုးရမယ့်အဖြစ်မျိုးမတတ်နိုင်သေးခဲ့ရင်.. လုပ်သင့်လားမေးချင်တာပါ...နောက်ပြီး..စက်တစ်ခုရဲ့ အမြင့်ဆုံး capacity ဟာ ဘယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲ..online ကရှာမယ်ဆိုဘယ်လိုရှာရမလဲ... တစ်ချို့စက်တွေမှာ (800 Mhz ထက်မြင့်တဲ့ memory speed တွေမြင်ဘူးလို့မေးကြည့်တာပါ)..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ခင်ဗျာ..
မောင်ပေါက် October 4, 2013 at 12:12 PM
ခုဒီမှာ ဖေါ်ပြထားတဲ့ Capacity ဟာ မိတ်ဆွေမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ RAM ရဲ့ Capacity ကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်.. အမြင့်ဆုံး Capacity ကို ကိုယ်တပ်ဆင်ထားတဲ့ Device ကိုသိရင် အလွယ်တကူ သိနိုင်တာပေါ့.. နောက်တစ်ခုက RAM ကို ဘယ်လောက်ထားရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့. Windows 32bit OS တွေမှာ အမြင့်ဆုံး4Gb ပဲယူသုံးပါတယ်.. 16 Gb တပ်ထားရင်လည်း4Gb ပဲယူသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်.. 64 bit OS တွေမှာတော့ RAM ကို 32 Gb ထိ ယူသုံးပါတယ်.. ဒီကုဒ်တွေက အရေးပေါ် အခြေအနေမှာသုံးနိုင်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် 64 bit OS တွေမှာတော့ ထိရောက်မှု ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး..
Xiaomi မြားအတှကျ Unicode Font Install လုပျနညျး၊ Keyboard ထညျ့နညျး၊ Message Application ထညျ့နညျး အပွညျ့အစုံ
Blog Archive February (6) January (3) November (3) October (21) September (14) August (3) July (3) June (1) May (6) December (7) October (3) September (3) August (8) July (10) June (1) May (24) April (35) March (6) February (2) January (9) December (28) November (7) October (1) September (6) August (11) July (23) June (26) May (11) April (11) March (16) February (14) January (10) December (10) November (28) October (19) September (15) August (18) July (54) June (45) May (32) April (60) March (57) February (54) January (54) December (35) November (40) October (35) September (24) August (89) July (61) June (34) May (61) April (27) March (39) February (48) January (84) December (68) November (51) October (23) September (19) August (30) July (13) June (19) May (5) April (7) March (18) February (136) January (37) December (44) November (29) October (50) September (72) August (45) July (48) June (35) May (27) April (30) March (28) February (8)